प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि आन्दोलनको शंख फुक्नुपर्‍यो : बाबुराम भट्टराई « Naya Page
प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि आन्दोलनको शंख फुक्नुपर्‍यो : बाबुराम भट्टराई
संखुवासभा, २३ माघ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेको जिकिर गरे ।
ओलीका कारण मुलुकमा संविधान र लोकतन्त्रका साथै संघीयता नै खतरामा परेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । उनले कांग्रेससँग सहकार्य हुन नसक्दा आ–आफ्नै तरिकाले सडक संघर्ष गर्नुपरेको पनि बताए । ‘हामीले नेपाली कांग्रेसलाई ओली सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन गरौँ भन्यौँ । कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटेसम्म संयुक्त आन्दोलन नगर्ने भनेका कारणले संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन,’ भट्टराईले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट